Tag: herinaratra | Martech Zone
Ahoana ny fomba hananganana ny seho PowerPoint Slide amin'ny varavarankely tokana ho an'ny hetsika virtoaly
Alarobia, Aprily 14, 2021 Alarobia, Aprily 14, 2021 Douglas Karr
Rehefa manohy miasa any an-trano ny orinasa dia nitombo ny isan'ireo fivoriana virtoaly. Tena gaga aho tamin'ny isan'ny fivoriana izay ahitan'ny mpanolotra fandaharana fizarana fampisehoana PowerPoint eo amin'ny efijery. Tsy manalavitra ny tenako amin'ity koa aho… Nandinika fotoana vitsivitsy teny an-dàlana aho ary nanemotra ny fanombohana webinar iray noho ny olana napetrako. Toerana iray tanteraka anefa, azoko antoka fa apetraka sy hotehirizina amin'ny Internet rehetra
Raha miasa ho an'ny mpanjifa marobe ianao, dia mety ho sarotra ny manangana tatitra momba ny sori-dalana na mampiditra loharano marobe amin'ny vahaolana dashboard. SiteKick dia afaka mitantana ny tatitra ataonao miverimberina miaraka amin'ny tatitra isan-kerinandro, isam-bolana ary isan-telovolana. Ny tatitra tsirairay dia ao anaty endrika fampisehoana (PowerPoint) ary azo asiana marika, misy marika fotsy amin'ny maso ivoho na ny mpanjifanao, ary ny valiny dia azo ovaina na fampahalalana fanampiny omena alohan'ny andefasana ny mpanjifanao. SiteKick dia manome ny tomban-tsoa azo avy amin'ny loharanom-pahalalana marobe
Tadiavo ny ivon'ny Gravity ho an'ny famolavolana fampisehoana lehibe
Alatsinainy, May 6, 2019 Friday, May 10, 2019 Kory Grushka
Fantatry ny rehetra fa ny PowerPoint no fitenin'ny orinasa. Ny olana dia ny ankabeazan'ireo rindrambaiko PowerPoint dia tsy inona fa ny andian-tsary mihetsiketsika diso tafahoatra ary matetika mampihetsi-po izay miaraka amina resaky ny mpanolotra. Rehefa namolavola famelabelarana an'arivony izahay dia nahita fomba fanao tsara indrindra izay tsotra nefa tsy dia miasa firy. Noho izany antony izany dia namorona Center of Gravity izahay, rafitra vaovao amin'ny fananganana fampisehoana. Ny hevitra dia ny deck tsirairay, ny slide rehetra, ary ny atiny rehetra
Alakamisy, May 5, 2016 Alakamisy, May 5, 2016 Douglas Karr
Nanoratra momba ny tanjon'ny rafitra Digital Asset Management sy ny fahafahan'izy ireo manampy amin'ny fiarovana ny marika sy ny fandefasana hafatra izahay, manome motera azo karohina hitadiavana atiny, ary koa fitaovana hanovana ireo karazana haino aman-jery hampiasaina amin'ny fantsona samihafa. Ireo mpivarotra mandroso aza dia mampiasa ny rafitra hanaraha-maso ny varotra sy ny lalam-barotra ary koa ny fahombiazan'ny varotra. Na dia rafitra DAM maro hafa aza dia rafitra rakitra be voninahitra izay tsy manatsara ny fizotrany, CELUM
Fomba 4 ny paikadim-pitantanana fampisehoana ataonao - na tsy fahampiana amin'izany - dia fotoana laniana, loharano ary orinasa
Talata, Desambra 15, 2015 Alarobia, Desambra 16, 2015 AlexAnndra Ontra
Azonao atao ve ny manampy ahy hametraka ity famelabelarana ity? Ny fivoriako dia afaka adiny iray. Tsy hitako ilay slide. Diso diso izany. $ #! * Izay ny tokotanin-tsambo diso. Fantatra ve? Avy eo ianao dia TSY mampiasa paikady fitantanana fampisehoana mahomby. Ary, vokatr'izany, very fotoana, loharanom-bola ary indrindra, orinasa ianao. Ny fitantanana fampisehoana dia miantoka fa ny hafatra marina dia ampitaina ao anatin'ny fotoana fitsikerana indrindra - rehefa misy mpivarotra miresaka amin'i a